Nagu saabsan - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
"Adeegga Caafimaadka Bulshada ee Inc. wuxuu ku faanaa bixinta tayada, daryeelka caafimaadka ee bukaanka iyo adeegyada leh xirfad iyo xamaasad, iskaashi lala sameeyo la-hawlgalayaasha bulshada si kor loogu qaado sinnaanta caafimaadka."
Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc. (CHSI) waa xarun daryeel caafimaad oo heer federaal aqoon u leh oo la aasaasay 1973 oo loo yaqaan Migrant Health Service Inc. (MHSI). Guddi Maamulayaal, oo ka kooban boqolkiiba 51 bukaanno aqlabiyad ah, ayaa xukuma ururkeenna. Bukaanleyda runti waxay cod ku leeyihiin hagista iyo hagida adeegyada la gaarsiiyay. MHSI waxay kubilaabtay aruurinta xarumo caafimaad oo yar yar, xilliyeed, kalkaaliyaal caafimaad oo ay maamusho oo diirada lagu saaray kaliya bixinta adeegyada daryeelka caafimaadka ee soogalootiga / beeralayda xilliyeed iyo qoysaskooda, iyadoo la adeegsanayo nidaamka lacag bixinta foojarka. Moodelkan cusub, isku day-iyo-runta ah ee daryeelka isku dhafan ee caafimaadka, ilkaha, iyo caafimaadka habdhaqanka ee isla saqafka iyadoo waliba lagu darayo adeegyo dheeri ah sida u gudbinta bulshada, isqorista Medicaid, iyo u doodista iyo adeegyada dhibaatooyinka ee dhibbanayaasha rabshadaha qoyska iyo faraxumaynta galmada.
Sannadkii 2014, magaca ayaa loo beddelay CHSI iyada oo laga jawaabayo baahida sii kordheysa ee ah in la ballaariyo adeegyada caafimaadka ee dhammaan bulshada ay u adeegto CHSI. Kordhinta joogtada ah iyo baahida loo qabo adeegyada awgeed, CHSI waxay ka hirgalisay shan meelood oo wareega sanadka Moorhead, MN, Crookston, MN, Grafton, ND, Rochester, MN iyo meesha ugu cusub ee aan ku yeelan doono Willmar, MN sanadkii 2009. Ogosto 2018, CHSI wuxuu furay cusub oo laga dhisay 5400-square foot clinic xarun ku taal Grafton, ND. CHSI waxay ku dadaaleysaa inay awood u siiso bukaanada maareynaya xaaladaha daba dheeraada iyo hagaajinta aqriska caafimaadka ka faa'iideysiga nidaamka diiwaanka caafimaadka elektiroonigga ah, telehealth iyo teknoolojiyada goynta. Sababtoo ah meelaha ugu badan ee adeegga miyiga ee Waqooyiga Dakota iyo Minnesota, CHSI waxay ka shaqeysaa laba qaybood oo guurguura oo loogu talogalay in lagu beddelo dadaallada lagu bixinayo adeegyada caafimaadka ee ay bukaanku ku nool yihiin kana shaqeeyaan. CHSI waxay u dirtaa unugyada guurguura beeraha, maqaayadaha maxalliga ah, kaniisadaha, loo shaqeeyayaasha ama goob kasta oo bukaanku uusan haysan gaadiid ama agab ay ku safraan.
Intii lagu gudajiray taariikhdeeda 45-sano, CHSI waxay abuurtay aasaas aamin ah, kaliya maahan shaqaalaha beeraleyda ee bulshada guud ahaan aagga adeegga, laakiin sidoo kale shabakad kaladuwan oo shuraako iskaashi ah. Adeegyada ay wada-hawlgalayaasheennu bixiyaan inta badan waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hubinta in bukaanka oo dhan - oo aan ku koobnayn oo keliya baahidooda daryeel caafimaad ee degdegga ah - in si taxaddar leh wax looga qabto. CHSI waxay lashaqeeysaa shabakad wada-hawlgalayaal bulshada ah si loo daboolo baahiyaha bukaan-socodka taas oo ka baxsan baaritaanka kaliya ee rugta caafimaadka. CHSI waxay sidoo kale si firfircoon ula xiriirtaa xarumaha kale ee caafimaadka bulshada iyada oo loo marayo xiriirka lala leeyahay Minnesota Xarumaha Caafimaadka Bulshada, Ururka Caafimaadka Bulshada ee Dakotas iyo Shabakada Caafimaadka ee Breakwater. CHSI waxay rajeyneysaa inay sii wado kobaca waxayna lashaqeysaa la-hawlgalayaashayada sidii loo dabooli lahaa baahiyaha daryeelka caafimaad ee bukaankeena iyo jaaliyadaha 45 sano oo kale, iyadoo xooga la saarayo tayada iyo tayada daryeelka caafimaad ee la awoodi karo.
Qaado Sahanka Jawaab celinta Bukaanka
Qaado Sahanka CAHPS
Sahanka Jawaab celinta Bukaanka
Magaca Bukaanka (Ikhtiyaar)
Goobta La Booqday*
- Goobta La Booqday * -Crookston, MNGrafton, NDMoorhead, MNRochester, MNWillmar, MNQeybta Mobilada WaqooyigaQaybta Mobile-ka ee Koonfurta
- Waaxda * -CaafimaadkailkahaCaafimaadka DabeecaddaXad-gudubka Maan-dooriyahaAdeegyada U-doodista Dhibbanaha
Ma rabtaa jawaab ka timaada shaqaalaheena?*
Ma jiraa xubin ka tirsan shaqaalaha CHSI oo aad jeclaan lahayd inaad aqoonsato?
Fadlan ha isticmaalin faalladayda.
Fadlan si xor ah u isticmaal faalladayda. Markaan saxo sanduuqan, waxaan oggolahay in Community Health Service Inc. ay u isticmaali karto ama u soo saari karto ra'yigayga, gebi ahaan ama qayb ahaan, inay soo saarto qoraallo yar yar ama waxyaabo kale oo ku saabsan Adeegga Caafimaadka Bulshada ee Inc., iyo / ama inay u adeegsato faalladayda warbaahinta dijitaalka ah. sida qoraal Facebook ah, tweet ama bogga internetka ee CHSI. Adiga oo calaamadeeya sanduuqan, waxaan ka sii daayaa CHSI wixii mas'uuliyad ah ee u adeegsanaya ra'yigeyga sida lagu sharaxay.
Fadlan ogow: Waqti ka waqti, waxaan u isticmaalnaa faallooyinka bukaan-socodka ee qormooyinka, isgaarsiinta Guddigayaga Agaasimayaasha, iyo daabacadaha kale. Marnaba ma isticmaali doonno magacyada bukaanka buuxa; halkii, waxaan u nisbeynaynaa faallooyinka sidan oo kale: "Dental patient DP" Fadlan nala soo socodsii haddii aan isticmaali karno faalladaada. Xulashadaadu ma saameyn doonto helitaankaaga adeegyada daryeelka caafimaadka ee CHSI ama wixii khuseeya biilasha. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka noqoto oggolaanshahan, fadlan noo sheeg adigoo noo soo qoraya cinwaanka hoose, ama email noogu soo dir: Xunyinefba@pufvpyvavpf.bet Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc. 810 4th Ave S, Suite 101, Moorhead, MN 56560
Ku darso CHSI
Taageeradaadu waxay naga caawineysaa inaan siino daryeel caafimaad oo tayo leh bulshadayada.
CHSI Waxay Bixisaa Adeegyo:
Waxbarashada Kalkaalisada Bilaashka ah
Baaritaanka Kansarka Ilmo-galeenka iyo Qalitaanka
Uk Hubinta Cunugga iyo Dhallinta
Caafimaadka Haweenka & Adeegyada Uurka ee Xaddidan
Waa hagaag Baaritaanka ilmaha
Baaritaanka STI & Maareynta Uurka
Adeegyada bilaashka ah ee dhammaan bukaanada CHSI waxaa ka mid ah waxbarashada caafimaadka & nafaqada, agabka waxbarashada caafimaadka labada-luuqadood, turjubaano, iyo goobta adeegga turjubaanka ee INDemand oo in ka badan 200 oo luuqadood ah.